ဝေဘာဂီမှာ Q ဝင်နေတဲ့ ဦးကျော် သူ ရဲ့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေ Negative ထွက် – XB Media Myanmar
ဝေဘာဂီမှာ Q ဝင်နေတဲ့ ဦးကျော် သူ ရဲ့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေ Negative ထွက်
ပရဟိတအလုပ်တွေ လုပ်ဆောင်ပြီး အများအကျိုးသယ်ပိုးနေတဲ့ ဦးကျော်သူတစ်ယောက် ကိုဗစ် Positive ကြောင့် ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီးမှာ Q ဝင်နေရတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေက စိုးရိမ်ပူပန်နေ ခဲ့ ကြ တာပါ ။ ဦးကျော်သူတစ်ယောက်လည်း ဆေးရုံတက်နေစဉ်ကာလတွေမှာ ဘုရားတရားကို အရင်ထပ်ပိုလုပ်ခဲ့တာ ပရိသတ်တွေလည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါနော် ။
လတ်တလောမှာတော့ ဦးကျော်သူက သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကို ကြေညာခဲ့ပါတယ် ။ N ကွ! ဆိုတော့ မင်းတို့နည်းတူ ငါလည်းဝမ်းသာမိတာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမယ့် ဒါတစ်သက်လုံး “N” ဖြစ်သွား တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိထားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် … ငါ ဒါလေးရေးပေးလိုက် တယ်။ ဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီး အပျော်မကြူးကြနဲ့။ မပေါ့ကြနဲ့။ လွတ်လပ်ပြီဆိုပြီး လမ်းမထွက် ဆေးရိုး လှမ်းကြသလို ဖြစ်ကုန်တော့မယ်။ သတိ! အသိ!အမြဲ ရှိ! ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ Negative ဖြစ်လို့ပျော်ပေမယ့် ဆင်ခြင်ပြီးနေဖို့ကို ပရိသတ်တွေကို ဆုံးမစကားဆိုထားပါသေးတယ် ။
ချစ်ပရိသတ်ကြီးကတော့ ဦးကျော်သူအခုလို အမြန်ဆုံးကျန်းမာလာတဲ့အတွက် အရမ်းကို ဝမ်း သာနေကြပြီး သတင်းကောင်းကြားရဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်းတွေ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ် ။ ဦးကျော်သူကို စိုးရိမ်နေကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက် ဝမ်း သာ နေကြမယ်ထင်ပါတယ်နော် ။
Source : Kyaw Thu
ပရဟိတအလုပ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီး အမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုးေနတဲ့ ဦးေက်ာ္သူတ စ္ေယာက္ ကိုဗစ္ Positive ေၾကာင့္ ေဝဘာဂီေဆး႐ုံႀကီးမွာ Q ဝင္ေနရ တဲ့အတြက္ ပရိသတ္ေတြက စိုးရိမ္ပူပန္ေန ခဲ့ ၾက တာပါ ။ ဦးေက်ာ္သူတစ္ေ ယာက္လည္း ေဆး႐ုံတက္ေနစဥ္ကာလေတြမွာ ဘုရားတရားကို အရင္ထပ္ပိုလုပ္ခဲ့တာ ပရိသ တ္ေ တြလည္းသိၿပီးျဖစ္မွာပါေနာ္ ။
လတ္တေလာမွာေတာ့ ဦးေက်ာ္သူက သတင္းေကာင္းေလးတစ္ခုကို ေၾကညာ ခဲ့ပါ တယ္ ။ N ကြ! ဆိုေတာ့ မင္းတို႔နည္းတူ ငါလည္းဝမ္းသာမိတာေပါ့ကြာ။ ဒါေ ပမယ့္ ဒါတစ္သက္လုံး “N” ျဖစ္သြား တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိထားဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါ့ေ ၾကာင့္ … ငါ ဒါေလးေရးေပးလိုက္ တယ္။ ဝမ္းသာတယ္ဆိုၿပီး အေပ်ာ္မၾ ကဴး ၾကနဲ႔။ မေပါ့ၾကနဲ႔။ လြတ္လပ္ၿပီဆိုၿပီး လမ္းမထြက္ ေဆး႐ိုး လွမ္း ၾ ကသ လို ျဖစ္ကုန္ေတာ့မယ္။ သတိ! အသိ!အၿမဲ ရွိ! ဆိုတဲ့စာသားေလးနဲ႔အတူ Negative ျဖစ္လို႔ေပ်ာ္ေပမယ့္ ဆင္ျခင္ၿပီးေနဖို႔ကို ပရိသတ္ေတြကို ဆုံးမ စကားဆိုထားပါေသးတယ္ ။
ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးကေတာ့ဦးေက်ာ္သူအခုလို အျမန္ဆုံးက်န္းမာလာတဲ့အတြက္ အရ မ္း ကို ဝမ္း သာေနၾကၿပီး သတင္းေကာင္းၾကားရဖို ႔ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ အေၾ ကာင္းေတြ ေရးသားခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ဦးေက်ာ္သူကို စိုးရိမ္ေနၾကတဲ့ ပရိ သတ္ ႀကီးလည္း ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာတဲ့အတြက္ ဝမ္း သာ ေနၾကမယ္ထင္ပါ
သံမဏိ လူသားမဟုတ်လို့ ကိုဗစ်ဖြစ် တာ မဆန်းပါဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ ထွန်း ကိုကို
တစ်ယောက်ထဲနေပြီး ကျန်းမာရေး မကောင်းရင်တောင် ဆေးခန်းပြစရာ မရှိတဲ့ သနားစရာအမေအိုကြီးကို ငွေ ကြေးကန်တော့ခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင်ရဲ့ ဗီဒီ ယို